shell ဆိုတာဘာလဲ | Linux မှ
jorgemanjarrezlerma | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာငါအကြောင်းကိုတင်ခဲ့သည် GNOME Shell နှင့်၎င်း၏အနာဂတ် နှင့်စာဖတ်သူကိုငါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောစဉ်းစားသောအရာတစ်ခုခုကိုကိုးကား, shell ကိုကဘာလဲ?
ကောင်းပြီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် - ကွန်ပျူတာများတွင်ဟူသောဝေါဟာရကို အခွံ ၎င်းသည် operating system ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရန် user interface တစ်ခုပေးသောပရိုဂရမ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်သူတို့အသုံးပြုသောမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ်စာသားသက်သက်သာဖြစ်သည်။ Shells များသည်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိမတူကွဲပြားသောပရိုဂရမ်များအားအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ကွပ်ကဲရန်အတွက်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။.
သတိပြုသင့်သည်မှာ Shell အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပြီး၎င်းတို့မှာ -
ဘုံစာလုံးခွံ como bash, emacs, အခြားသူများအကြား Windows command prompt ။
ဘုံဇယားခွံ como အခြားသူများအနေဖြင့် GNome, KDE, XFCE, LXDE, Unity, MacOS Desktop Environment, Windows Desktop စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် GUI ၏ (ဂရပ်ဖစ် environments) မှသို့မဟုတ် terminal မှအသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးမှုမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ Shell သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသော desktop environment (DE) သို့မဟုတ် Windows Manager (WM) ကိုစကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်အတိုချုပ်ပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် operating systems မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် application များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ။
ဤကဲ့သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို Android, iOS သို့မဟုတ် Windows Phone များရှိသည့်စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းပစ္စည်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆုံးစွန်သောကတည်းက preconfigured DE သို့မဟုတ် WM နှင့်အတူ operating system များဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် KDE သည် Shell ဖြစ်သည်။ XFCE သည် Shell ဖြစ်သည်။ LXDE သည် Shell ဖြစ်သည်။ iOS သည် Shell ဖြစ်သည်။ Android သည် Shell ဖြစ်သည်။ Windows Phone Shell တစ်ခုဖြစ်သည်။ terminal သည် shell (bash မှတစ်ဆင့်) ဖြစ်၍ GNOME နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာပြောနိုင်သနည်း3က၎င်း၏ interface နဲ့အသွင်အပြင်အခြားဘာမျှအကြောင်းပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။
KDE နှင့် / သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းမှအဖွဲ့ဝင်များသည်ယနေ့ Gnome စီမံကိန်းအသုံးပြုသောအတွေးအခေါ်နှင့်ဆင်တူသော (အလားတူဒnotနိကဗေဒ) နှင့်ပတ်သတ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစမ်းသပ်ခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် KDE ကို KDE Shell ဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပိုဒ်များတွင်ရှင်းပြထားသည့်အချက်များအားလုံးအတွက်၊ GNOME3(Shell) တွင်အချို့သောသူများမှ (သို့) အခြားသူများကမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအနာဂတ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်စွပ်စွဲနိုင်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှကျွန်ုပ်ယူခဲ့သောအဓိပ္ပါယ်နှင့်အခွံအမျိုးအစားများသည် link ဖြစ်သည် ဤ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » shell ဆိုတာဘာလဲ
ကောင်းပြီ၊ ဒါက shell ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလျှင် shells သည်အနာဂတ်ရှိသည်။
ငါအခြားပို့စ်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါကပိုပြီး configure လုပ်မပေးလျှင်သို့သော် Gnome desktop ပတ်ဝန်းကျင် (GNome-shell ကိုနားလည်) ၌ရှိမရှိပါ။
ငါအခွံကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလက်တွေ့မကျသည့် gnome3 ကိုသာဆန့်ကျင်လိုသည်။
အိုကေ !! ယခုအခါပိုမိုရှင်းလင်းလာပြီဖြစ်သည်။ Desktop Environments (DE) နှင့် Window Managers (WM) တို့သည် shell အမျိုးအစားထဲကိုဝင်ရောက်နေသည်ကိုငါနားလည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ entry ကိုနှင့်ရှင်းလင်းချက်ငါ့ထံသို့စုံလင်ပုံရသည်။ Shell ဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒီထက်ပိုသိတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသဘောတရားတွေကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်နှင့်ငါ shell တစ်ခု (command line) ဖြစ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်ကိုမမေ့ဘဲအမှန်အကန်ဖြစ်သော်လည်းမှန်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စာသားဖြစ်သည်။ Desktop မန်နေဂျာကို WM + Shell + အခြားကိရိယာများ၏ပေါင်းလဒ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ Cinnamon (အခြား Shell တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်) ကို install လုပ်ရန်၊ Gnome Shell ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ Arch (အနည်းဆုံးတပ်ဆင်ခြင်း) ကိုမည်သို့တပ်ဆင်နိုင်မည်ကိုစဉ်းစားနေသောကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုထည့်သွင်းရန်စိတ်ဝင်စားခြင်းသို့မဟုတ်မတော်တဆဖြစ်ခြင်း။ ငါ pacman (-ignore သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု) နှင့်အတူအချို့သော parameters တွေကိုသုံးပြီးကလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါမသိရ။ ထိုအခါငါ GDM အစား LightDM-Ubuntu ကို install ချင်ပါတယ်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင် Nemo, Pantheon, စသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားကြိုးစားရန် Nautilus install လုပ်မပေးပါ။ နည်းနည်း Cinnarch တူပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်နေတာနဲ့တူ။ ဒါပေမယ့် Gnome Shell ကိုအခြားတစ်ခုအနေဖြင့်လဲလှယ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများထည့်သွင်းရန်မစဉ်းစားတော့ဟုငါပြောပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောမှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ) ။
အဓိပ္ပာယ်ကိုတီထွင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ KDE SC4၏တရားဝင်“ shell” ကို Plasma ဟုခေါ်ပြီး GNOME Shell နှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်။ GNOME3၏တရားဝင် "shell" ကို GNOME Shell ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏ developer များက၎င်းကိုအလိုရှိသည်။ ထို့အပြင် KDE ကိုပတ်ဝန်းကျင် (အသိုင်းအဝိုင်းကဲ့သို့မဟုတ်ဟု) အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုအလွတ်သဘောပြောဆိုမှုများတွင်လက်ခံနိုင်သည်။ သို့သော်မှားသည် (ဝီကီပီးဒီးယားကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောနိုင်သည်) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် KDE SC4ကိုတီထွင်သူများသည်ဤရိုးရှင်းမှုကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကလက်မခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ GNOME တွင်၎င်းတို့တွင်အခြားပေါ်လစီရှိသည်၊ ရပ်ရွာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတူညီကြသည်။
အခုငါစဉ်းစားလိုက်ပြီ၊ သင်မှန်ပြီ၊ ပြီးတော့ lxde ဆိုတာ shell တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသဘောမတူဘူး၊ ဒါက XFCE နှင့်အခြား desktop ကွန်ယက်တစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ bad shell ဆိုတာတခြားသူတွေရဲ့ gnome လည်းမဟုတ်ဘူး တိုင်ကြားချက်၊ Plasma တိုင်ကြားချက်များရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ (သင်ကွန်ပျူတာ ၂၅၆ သိုးပါသောကွန်ပျူတာတွင်မထည့်ပါက)
အတိအကျ သင်ပံ့ပိုးပေးသည့်အရာတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ (အလွတ်သဘောပြောရလျှင်) Shell မဟုတ်ပါ။ Desktop Environment, Plasma သည် KDE Shell ဖြစ်သည်။ ငါမှားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Shell နဲ့ DE တို့ရဲ့သဘောတရားတွေကအဲဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး
သူတို့ကိုငါအတူတူမစဉ်းစားကြဘူး။ ငါ့အတွက်တစ်ခုကတော့ desktop (metaphor နောက်ကိုလိုက်တဲ့ graphical interface) နောက်တစ်ခု - desktop environment (desktop နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ သို့သော်ဥပမာများနှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ GNOME3သည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး GNOME Shell, Unity စသည်တို့သည် Desktop (GUI သို့မဟုတ် graphical shells) များဖြစ်သည်။
အတိအကျဆိုရသော် Desktop သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ခံပုံများ၊ panel၊ အမှိုက်ပုံများစသည်တို့ရှိသည်။ Desktop Environment သည် Desktop ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော tools များနှင့် element များဖြစ်ပြီး Shell သည် desktop သို့မဟုတ် desktop အသစ်၌ထားသည့်အဆင်တန်ဆာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော်ငြားလည်းမှားယွင်း။ မရနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်မှားသည်ဟုထင်ရသည်မဟုတ်လား။ ...
@ José Miguel, Wikipedia သည်လူများကိုစာကြည့်တိုက်များဟုခေါ်သည့်မသန်မစွမ်းသတ္တဝါများကထိန်းချုပ်ထားသည်။ သူတို့ရဲ့ကစားစရာတွေကမထိဖို့မသင့်တော်ဘူး (မင်းတို့ထဲကတစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ရင်) ။
ဝီကီပီးဒီးယားသည်၎င်း၏စာမျက်နှာများစွာတွင်သူ့ဟာသူဆန့်ကျင်နေသည် Unity အကြောင်းသူတို့ရေးထားတဲ့ link တွေထဲမှာဘာတွေရေးထားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
Apparentity Unity သည် GNOME desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ matrioska ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ဒါကြောင့် KDE SC ရဲ့အကြောင်းကြောင့်
Jorge Manjarrez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါကအရမ်းအချိန်မီပုံရသည်တဲ့မှတ်ချက်ကိုကိုးကားခြင်းဖြင့်ဤ post ကိုသာလုပ်လေ၏။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကြေငြာချက်များနှင့်မှတ်ချက်များတွင်အားလုံးမှန်ကန်ပြီး KDE သည် DE နှင့် Plasma the shell ဖြစ်သည်။ gnome သည်သာဓက (၂) ခုကိုတစ်ခုတည်းအဖြစ်သို့ပေါင်းစည်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည်။ စိတ်ကူးသည်ကောင်းသည်၊ ဆိုးလျှင်၊ ကျွန်ုပ်မသိ၊ ၎င်းတွင်အနာဂတ်ရှိပါကအချိန်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။
ငါ gnome သည်ဤ "သစ်" DE + Shell အားပုံသဏ္andာန်နှင့်ပစ္စည်းများကိုတဖြည်းဖြည်းပေးခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုများကိုပြန်လည်တည်းဖြတ်မှု ၆ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်တည်းဖြတ်မှု ၈ တွင် (အထူးသဖြင့် GUIsers အတွက်) အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အခြားကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ terminal ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် CSS ကိုပြုပြင်ခြင်းသည်အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနှင့်လက်တွေ့ကျသောစားပွဲခုံတစ်ခုကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
Jorge Manjarrez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းတစ်ခုမှာ Qt တွင်ပြုလုပ်သော gnome3shell ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ KDE နှင့် ပတ်သက်၍ Windóusicoပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်« KDE SC4၏တရားဝင် shell ကို Plasma လို့ခေါ်တယ်»
PS: gnome shell ကိုကိုင်ထားပါ။
[quote = piayet] [quote = piayet] တစ်စုံတစ် ဦး က Gnome3နှင့် Gnome Shell တို့၏ခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါသလား။
haha capo, အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
မိုင်းသည် windows hehehee xd နှင့်အတူမှတ်ချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်
FEDORA 17 မှာ windows အောက်မှာ run မယ့်ပရိုဂရမ်တွေဘယ်လို install ရမလဲဆိုတာတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီချင်တယ်
ငါ TERMINAL ကနေကြိုးစားကြည့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအခြားဗားရှင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာ install လုပ်ထားတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါ။ သို့သော်၎င်းသည် config နှင့် version 2.8.0.6 ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ install လုပ်ထားသည့်တစ်ခုမှာ 2.8.0.8 ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖိုင် (သို့) drivers များ၏ဝဘ်သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းသောပုံတွင် ငါ့ကိုအမှားအယွင်းပေးသည့်အခါ terminal ကိုသို့သော်တပ်ဆင်ရန်လိုသောအခါ၎င်းသည်မွမ်းမံထားသောဗားရှင်းကို install လုပ်သည်ဟုပြောသည်။
ငါ့မှာစိတ်ကူးကနောက်ဆုံး version ကို uninstall လုပ်ပြီး version ဟောင်းကို install လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ linux ထဲမှာသာဒီ command ကို uninstall လုပ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး။
ထည့်သွင်းရန်စပျစ်ရည်နှင့် virtualization အပြင်အခြားအစီအစဉ်များရှိပါက။ ဒီတော့နောက်တစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။
နောက်တစ်ခုကငါက messenger ကို install လုပ်ထားပေမယ့် install လုပ်ထားတဲ့သူတွေက hotmail messenger ကိုသာဆက်သွယ်ပေးတယ်။ ငါ Hotmail အကောင့်နဲ့ဆိုလိုတာက yahoo ကမှားသွားတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ windows media player 11 နဲ့ version 12 လိုအသံကောင်းတဲ့ကစားသမားကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
Fedora 17 မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ဒီအသံကမကောင်းဘူး။ အဲဒါ sorrund အသံပါ
ငါအသစ်များအပြစ်တင်ကြဘူး, ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ GNU / Linux ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်။ ဤအရာတို့ကိုငါ့အားရှုပ်ထွေး🙂
သို့သော်စာမူရေးသားသူသည်အနည်းငယ်ပိုမိုသုတေသနပြုပြီးအမှားများကိုပြုပြင်လျှင်ကောင်းလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဂရပ်ဖစ် shell ကိုကွန်ပျူတာ၌အဘယျသို့၏ယေဘုယျအယူအဆအတန်ငယ်မှန်ကန်သောဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် GNU / Linux ကိုအတွက် Shell ဟူသောစကားလုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူမ။
@elav သည်သူ၏သဘောတရားများကိုအတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့သည်။ အလားတူ၊ ဝီကီပီးဒီးယားတွင် (စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်နှစ်မျိုးလုံးတွင်) အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်။
* Desktop Environments: KDE, GNOME, Xfce, LXDE စသည်တို့ဖြစ်သည်
* Window Manager - KWin၊ Metacity, Mutter, Enlightenment, Xfwm စသဖြင့်
* Graphical user interface (User Iinterface): KDE တွင်သူတို့ကို Workspace ဟုခေါ်သည်။ Plasma Desktop (Desktops), Plasma Netbook နှင့် Plasma Active (mobile devices) သုံးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် Workspace တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ graphical user interface တစ်ခုဖြစ်သည်။
GENOME တွင်စီမံကိန်း၏တရားဝင်ဖြစ်သော UOME နှင့် Ubuntu အတွက် GNOME Shell ရှိသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောအရာသည်စီမံကိန်းတစ်ခုစီ၏တရားဝင်စာမျက်နှာများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ cacaos များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အနည်းငယ်မျှတမှုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမဆိုဝီကီပီးဒီးယား၏အချက်အလက်များကိုတည်းဖြတ်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သို့သော်ငါသည်လည်းထိုသို့ပြုမှပိုကောင်းတိကျသေချာရေးထားလျက်ရှိသည်သောဘာသာရပ်ရှိခြင်းဘာသာရပ်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သောဖြစ်ဖို့သောစိတ်ကူး၏။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ စပိန်လိုဝီကီပီးဒီးယားမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမပူးပေါင်းဘဲဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်တဲ့သုတေသနပြုမထားရင်တောင် entries တွေထပ်ထည့်မယ်။
ဘလော့ဂ်ရေးသားသူအားသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းရန်ထပ်မံတောင်းဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကဲ့သို့သောရေးသွင်းချက်တစ်ခုမှသူတို့သည် KDE သည် Shell တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကြက်သီးထစရာဖြစ်စေသည်။
Manuel Trujillo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မှားကောင်းမှားကောင်းထင်မိနိုင်သော်လည်း၊ သင်ဖော်ပြသောအရာသည်လုံးဝမမှန်ကန်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ကိုလိုက်နာပါက Gnome-Shell * ဖြစ်ပါက shell တစ်ခုဖြစ်ပါက KWin ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင် Gnome နှင့် / သို့မဟုတ် KDE မည်သည့်အခါ၌မျှထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ (အခြား desktop များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်မပေးသကဲ့သို့၎င်းနှစ်ခုကိုလည်းမသိပါ။ )
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မည်သည့် Window-Manager (AfterStep, Enlightenment, FluxBox, WindowMaker, Fvwm စသည်) သည်သင်၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိပါက။ ဒါပေမယ့်ဒီလောက်တောင်များများစားစားမဖြစ်နိူင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ system နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့ X system ပါ ၀ င်ပြီး Window Manager ကတော့ graphical X system (အပြန်အလှန်အားဖြင့်အချို့သောနည်းလမ်းများနှင့်) အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့ shell တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျန်ကွန်ပျူတာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Manuel Trujillo ကိုပြန်ပြောပါ
briseida iras lopez jimenez ဟုသူကပြောသည်
ငါ shell ကိုမကြိုက်ဘူး
briseida iras lopez jimenez အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ